वीरगंजका मेयर जर्मनीका फ्यान, यस्तो छ उनको महानगरमा फुटबल क्रेज बढाउने योजना :: PahiloPost
वीरगंजका मेयर जर्मनीका फ्यान, यस्तो छ उनको महानगरमा फुटबल क्रेज बढाउने योजना
11th June 2018, 03:08 pm | २८ जेठ २०७५
बिहीवार देखि रसियामा फुटबलको विश्वकप शुरु हुँदैछ। कतिको उत्सुक हुनुहुन्छ?
मेरो झुकाव पहिलेदेखि नै फुटबलतिरै बढी छ,स्कूल जीवनदेखि नै फुटबल खेलेर हुर्केको छु। पछि क्रिकेटको क्रेज आएको हो। विश्वकपको लिग
म्याचहरुको लाइभ हेर्दिनँ तर हाइलाइट्स अवश्य हेर्छु। पूरा खेल हेर्न व्यस्तताले समय पाइँदैन।
कुन देशको खेल मन पर्छ ?
युरोपियन देशका सबै टिम राम्रा छन्। तर मलाई शुरुदेखि जर्मनीको खेल मन पर्छ। उनीहरुको टेक्निक र गेम प्लानिङमा छुट्टै मौलिकता पाइन्छ। अरु देशभन्दा जर्मनीको खेल फरक लाग्छ,अट्याकिङ पनि खेल्छन्।
कुन खेलाडीप्रति धेरै समर्थन छ?
विद्यालय जीवनमा रोनाल्डोको खेलबाट बढी प्रभावित थिएँ। चर्चा पनि उसकै बढी भएर होला। म्याराडोना,मेसीलाई पनि सपोर्ट गरेँ। अब जो राम्रो खेल्छ उसैलाई मेरो समर्थन रहनेछ। धेरै खेलाडी राम्रा छन्, आजको युगमा जसले राम्रो खेल देखाउँछ,हामी उसैको प्रशंसा गर्ने हो।
पहिले र अहिलेको फुटबलको खेलमा के फरक महसुस गर्नु हुन्छ ?
निश्चित रुपले पहिले र अहिलेको फुटबल खेल धेरै चेन्ज भइसकेका छन्,पहिले र अहिलेको खेलको टेक्निक्स र खेल जित्ने रणनीतिमा पनि आइटी र टेक्नोलोजीमार्फत् प्रशिक्षण गराइन्छ। कोचहरुको प्रशिक्षण पनि बदलिएको छ।पहिले टाढाबाट पास दिँदै गोल गन्थ्यिो भने आज लङ डिस्टेन्सबाट पनि कम मेहनत गरी कतिपय खेलाडी डाइरेक्ट शट हानी गोल गर्छन्।
विश्वकपको लागि प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न वीरगंजमा कस्तो तयारी छ ?
त्यस्तो त हालसम्म सुनेको छैन। एक ठाउँ हुन सक्छ ,माईस्थान चोकमा स्क्रिन लगाएर लाइभ म्याच हेराउन सकिन्छ,यदि त्यसको लागि कुनै प्रस्ताव आयो भने हामी पनि केही सहयोग गर्न सक्छौ। तर वर्षाको सिजन छ,फुटबलप्रेमी घरमै बसेर खेल हेर्न बढी रुचाउँछन्। महानगरभित्र केबल वा स्थानीय च्यानलबाट पनि खेल हेराउने वातावरण मिलाउन सकिन्छ।
वीरगंजमा लगभग फुटबल सुखिसकेको छ,के गर्नु पर्ने जरुरी ठान्नु हुन्छ ?
पक्कै पनि विगतको दुई दशकमा वीरगंजले जनयुद्ध मधेस आन्दोलन र जनप्रतिनिधिविहिनको अवस्थालाई झेलेको छ।पछिल्लो समयमा वीरगंजमा गरिने खेलकुदका गतिविधिमा प्रायोजकको पनि कमी हुँदै गयो। खेलकुदका गतिविधि कम हुन थाल्यो। तर वीरगंजमा जुन फुटबलप्रतिको क्रेजको मौलिकता थियो,त्यो सिमरामा गयो। सिमराले फुटबलको क्रेजलाई क्याच गर्‍यो ।यद्यपि वीरगंजमा पहिले फुटबलको
क्रेज थियो,त्यसलाई पुनः फर्काउन म प्रतिबद्ध रहने छु।
के के छन् त्यस्ता योजनाहरु ?
आगामी नगरसभामा वीरगंजमा हरेक वर्ष महानगर भित्र रहेका ३२ वडाको महानगरस्तरीय फुटबल मेयर कप र क्रिकेट मेयर कप आयोजना गर्ने पैसा छुटयाउँछु।त्यसबाट सेलेक्शन गरे वीरगंज महानगरको दुबै खेलको एउटा एउटा टिम बनाउँछु। जुन टिम अन्य महानगरको टिम वा क्लबसँग खेल्छ। यसले वीरगंजमा वडा स्तरबाट खेलप्रति जागरुकता बढाउनुको साथै राम्रो खेलाडी उत्पादनमा मद्दत गर्नेछ।
वीरगंजमा दुई वटा रंगशाला छन्,आदर्शनगर र नारायणी तर अवस्था जर्जर छन्,स्तरोन्ति वा मर्मतको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?
आदर्शनगरको ग्राउन्ड माटो पुरेर मर्मतको काम लगभग सकिन लागेको छ। त्यसमा अब कुनै पनि मेला जस्तो कार्यक्रम पाइँदैन,शुद्ध खेल गतिविधिको लागि मात्र तयारी चल्दैछ। मेला इभेन्टको लागि घण्टाघर अगाडिको जग्गालाई व्यवस्थापन मिलाई त्यस्ता कार्यक्रम त्यहाँ
गराउने वातावरण मिलाउँदैछु। अर्कोतिर नारायणी रंगशालाको कोही माईबाप छैन,खेलकुद विकास समिति वा अन्य निकाय नाममात्रका छन् ।महानगर पनि वेट एण्ड वाचको फेजबाट अघि बढिरहेको छ,नारायणी रंगशालाको विषयमा पनि महानगर गम्भीर छ,त्यसको पनि स्तरोन्ति र संरक्षण गर्ने हाम्रो नीति छ।
वीरगंजका मेयर जर्मनीका फ्यान, यस्तो छ उनको महानगरमा फुटबल क्रेज बढाउने योजना को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।